Qarax Xildhibaanno Lagu Dhaawacay Oo Ka Dhacay Jowhar. – Bogga Calamada.com
Qarax Xildhibaanno Lagu Dhaawacay Oo Ka Dhacay Jowhar.
Magaaalda Jowhar ee xarunta gobolka Sh/dhexe waxaa ka dhacay qarax aad u culus oo lala eegtay xildhibaanno ka tirsan baarlamaanka maamul goboleedka Hirshabeelle xilli saacado uun ka hor magaaladaas lagu soo gabagabeeyay doorashooyinka senatorrada aqalka sare ee baarlamaanka dowladda federaalka.
Wararka ka imaanaya Jowhar waxay sheegayaan in qaraxan oo jugtiisa laga maqlay xaafadaha degmada si gaar ah ay Mujaahidiintu ula beegsadeen xildhibaanno ka tirsan baarlamaanka maamulka Guudlaawe waxaana qaraxan uu gaystay khasaare kala duwan oo soo gaaray xildhibaannada.
Ilo wareedyo muhiim ah waxay xaqiijiyeen in qaraxaas ay dhaawacyo garaab ah ku noqdeen labo xildhibaan s oo sida la sheegay dhaawacyadoodu yihiin kuwa aad u culus.
Xildhibaannada weerarkan lagu dhaawacay waa Maxamed Dheere iyo Iidow waxayna ka mid ahaayeen XL baarlamaanka maamulka Hirshabeelle ilo masuul ahna waxay xaqiijiyeen in dhaawacyada labada xildhibaan loola cararay cisbitaallada maamulka halkaas oo lagula tacaalayo xaaladooda.
Degmada Jowhar waxaa dhowaan sidan oo kale uga dhacay qarax culus oo lagu dhaawacay xildhibaanno ka tirsan dawaaqiidda maamulka fadhigiisu yahay magaalada Jowhar ka dib markii ciidamada shabaabul Mujaahidiin ay weerar qarax ah ku weerareen hoy ay xildhibaanadaasi ka deganaayeen magaalada Baraawe.